आफ्नो आँखाको उपचारको लागि डा. सन्दूक रुईतसंग उपचार गर्न जाँदै नन्दा (भि”डियो सहित) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/आफ्नो आँखाको उपचारको लागि डा. सन्दूक रुईतसंग उपचार गर्न जाँदै नन्दा (भि”डियो सहित)
आफ्नो आँखाको उपचारको लागि डा. सन्दूक रुईतसंग उपचार गर्न जाँदै नन्दा (भि”डियो सहित)
6,287 1 minute read
“बाल्यकालमा अरु साथी खेलेको देख्दा मलाई पनि खेल्न मन लाग्थ्यो। अरु साथीसँग मलाई खेल्नसमेत दिइँदैनथ्यो किनकी मेरो जस्तै आँखा नदेख्ने रोग अरु केटाकेटीलाई पनि सर्छ भन्थे । मन भित्रभित्रै रुन्”थ्यो, बाल्यकालमा आँखा न”देख्ने अ”न्धी भनेर हे”प्थे ।” नन्दाले भावुक भएर सुनाइन् । तर मेरो मनमा एउटा आँ”ट पलायो, जीवनमा केही न केही गर्छु भनेर मनलाई द”ह्रो बनाए। नन्दाले बताइन् । त्यसपछि नन्दा आफ्नी मिल्ने साथी संग काठमाडौ आइन र काठमाडौंमा बाल-आश्रम चलाइन र अहिले पनि चलाइरहेकी छिन् ।
उनले आफ्नो बाल्यकाल देखिकै मिल्ने साथी गिता बस्नेत संग मिलेर अन्तरदृष्टि नेपाल’ नामक अना”थालय सञ्चालन गरे । आफैमा दृष्टिबिहिन, आफुलाई नै अरुको साहारा चाहिने हुदाहुदै पनि संस्थामा करिब एक दर्जन बालबालिकाहरुलाई आश्रय दिदै आएकी छिन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
भर्खरै मात्र विवाह बन्धनमा बाँधिएर नन्दा अहिले फेरि काठमाडौ आइपुगेकी छिन । उनी काठमाडौ आइसकेपछी एक युटुब च्यानलमा एउटा कुराको खुलासा गरेकी छिन । तपाइँको आँखाको उपचारको लागि के सोच्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा नन्दा भन्छिन :- मेरो आँखा बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन तर पनि अब म केही दिनमै वरिष्ठ डा. सन्दुक रुइत संग परामर्श लिन उहाँलाइ भेट्न जाँदै छु । नेपालमा नभएर विदेश मा हुने भयो भने पनि म जान सक्दिन किनकी मेरो त्यँहा सम्म जाने हैसियत छिन । भरिसक नेपालमै भैदिएको भए सहज हुन्थ्यो; म भन्दा पनि मेरा यी बालबच्चा लाई हुर्काउन अझ बढी सहज हुन्थ्यो भन्ने उनको उनको भनाई थियो । अब हेर्नुस् अन्य अरु के के भनिन त आफ्नो आँखाको उपचारको बारेमा । भिडियो हेर्न तल लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।
२४ वर्षीय युवकले तीन सन्तानकी आमालाई भगाएको भनिएका भाग्ने र भगाउने यी दुवै समातिए, भन्छन्,‘जे हुनु भईसक्यो अब हामी छुटिंदैनौं’
एक्लैले ३० जना तालि¥वानमाथी विजय हाँसिल गरेका ब¥हादुर गो”र्खा सै¥निक पहिलोपटक मिडियामा (भि”डियो सहित)
रंगशालामा ऋण लागेर धुर्मुस रुदै निस्किए पछी मजदुरले बाटोखर्च दिएको भिडियो हेरेपछी आयो कडा प्रश्न (भिडियो सहित)
श्वेता ले श्री कृष्ण को फोटो छोएर के कसम खाएकी थिईन?(भिडियो)